दाङमा अभियानमुखी मकैखेती | गृहपृष्ठ
Home समाचार दाङमा अभियानमुखी मकैखेती
दाङमा अभियानमुखी मकैखेती
असार २१, (घोराही) दाङ (अस)। यस वर्षदाङमा थप १ सय हेक्टर जमीनमा अभियानमुखी मकैखेती शुरू भएको छ । गत वर्षबाट दाङमा २ सय हेक्टर सिँचाइयोग्य जमीनमा अभियानमुखी मकैखेती शुरू गरिएको थियो । यस वर्षमकैखेतीको क्षेत्रफल बढाएर ३ सय हेक्टर पुर्याइएको हो । जिल्लामा मकै उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले अभियानमुखी मकैखेती शुरू गरिएको कृषि विकास कार्यालय दाङका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर अधिकारीले बताए । अभियानमुखी मकैखेतीका लागि सरकारले प्रत्येक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत बीउमा ३३ प्रतिशत अनुदान तथा नि:शुल्क प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको अधिकारीले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दाङमा ५४ हजार ९ सय मेटि्रक टन मकै उत्पादन भएको थियो । चालू आवको मकै उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने कृषि कार्यालयको अनुमान छ । गतवर्षको तुलनामा यस वर्षअभियानमुखी मकैखेतीको क्षेत्रफल बढेको तथा अनुकूल मौसमका कारण उत्पादन बढ्ने कार्यालयका प्राविधिक बालकृष्ण शाहले अभियानलाई बताए । ‘यस वर्षसमयमै मकैखेती भएको र हालसम्म रोगका कीराको प्रकोप नदेखिएकाले मकै उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ,’ शाहले भने ।
दाङमा उत्पादित मकैमध्ये करीब ९० प्रतिशत पशुपक्षीको दानामा र १० प्रतिशत मात्र खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको कार्यालयका योजना अधिकृत तिलक केसीले बताए । विगत केही वर्षयता दाङमा मकैको मूल्य बढ्दै गएकाले मकै बेचेर चामल खाने प्रवृत्ति बढेको पनि उनले जानकारी दिए । अभियानमुखी मकैखेती दाङका टरिगाउँ, सौंडियार, बाघमारे, गढवा, सतवरिया, लालमटिया, सोनपुर, नारायणपुर, डुरुवा, ढिकपुर, गङ्गापरस्पुर र पवननगर गाविसमा गरिएको छ । उक्त मकैखेतीका लागि भूमिगत जलस्रोत विकास समिति लमहीको सहयोगमा सञ्चालित डिपबोरिङबाट सिँचाइ गरिँदै आएको बाली विकास अधिकृत पवन गिरिले बताए । समितिले दाङमा ५५ ओटा डिप टयुबवेल (बोरिङ) र १ हजार ४ सय १८ स्यालो टुयबवेलमार्फत करीब ५ हजार ८ सय ६४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको छ । जिल्लामा अभियानमुखी मकैखेती शुरू भएपछि त्यसतर्फ किसानको आर्कषण बढेको कृषि विकास कार्यालय दाङले बताएको छ । दाङमा भारतबाट वार्षिक करीब रू. १० करोडको मकै आयात हुँदै आएको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
गाविसको लगानीमा फलफूल खेती
मोरङ जिल्लाको पाटी गाविसका किसानले कृषिमा नौलो आयाम थपेका छन् । उनीहरूले गाविसमा सामूहिक फलफूल खेती शुरू गरेर मनग्य आम्दानी गरेका छन् । गाविसको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा उनीहरूले फलफूल खेती शुरू गरेका हुन् । खेतीबाट प्राप्त आम्दानी पनि गाविसकै विकासमा लगाइने भएपछि यसतर्फकृषक आकर्षित भएका हुन् । यो मोरङ जिल्लाको दुर्गम पहाडी गाविस हो । दुर्गम गाविस भएका कारण अन्य उत्पादनको सम्भावना कम भए पनि त्यहाँका कृषकले फलफूल खेतीमा सफलता प्राप्त गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका पूर्व-प्रमुख मोहनबहादुर थापाले बताए । २०६४ सालमा थापाले पहिलोपटक गाविसमै पुगेर कृषकलाई फलफूल खेतीसम्बन्धी तालीम प्रदान गरेका थिए । तालीमपछि सो गाविसमा काठमाडौं कीर्तिपुर स्थित बागवानी केन्द्रबाट ३ सय बोट जापानी जातका हलुवावेद र नासपाती लगेर रोपिएको उनले बताए । यसअघि बाँझो रहेका सो गाविसको ऐलानी जग्गामा करीब ७ सय घरधुरी समूह निर्माण गरी फलफूल खेती थालेका हुन् । सो गाविसमा विगत ४/५ वर्षदेखि तरकारी खेती पनि हुँदै आएको छ । तरकारी खेतीको तुलनामा फलफूल खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि कतिपय किसान फलफूल खेतीमा पनि लागेका छन् ।
नेपालमा गाविसले कृषिमा लगानी गरेको यो पहिलोपटक हो । आव २०६४/०६५ देखि रू. ४० हजारबाट आर्थिक सहयोग दिन शुरू गरेको गाविसले आव २०६७/६८ मा सहयोग रकम बढाएर रू. ४ लाख पुर्याएको छ । यसैगरी आव २०६५/०६६ मा रू. ८० हजार र २०६६/०६७ मा रू.२ लाख सहयोग गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सोमबहादुर राई बताउँछन् । उनका अनुसार यहाँ ८ सय बोट फलफूल लगाइएकोमा ६ सय ४ बोट हुर्किएका छन् । यहाँ हलुवावेद, नासपाती, जापानी नासपाती, आरू र आरुवखडालगायत फलफूल रोपिएका छन् । फलफूलबाट प्राप्त हुने आम्दानी गाविसको आम्दानीको स्रोत बनाउन त्यहाँका कृषकहरूको समूहगत प्रयास नितान्त नौलो देखिएको छ ।
३० लाखको बीउ आलु शीत भण्डारमा
असार २१, सिन्धुली । जिल्लामा शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय कृषकहरूले रू. ३० लाखबराबरको करीब ५ सय मेट्रिकटन बीउ आलु भण्डारण गरेका छन् । जापान सरकार तथा स्थानीय निकायको सहयोगमा ५सय मेट्रिकटन क्षमताको शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) निर्माण गरिएको हो । शीत भण्डार रू. १ करोड २९ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको शीत भण्डारका सञ्चालक एवम् जुनार विकास सङ्घ, सिन्धुलीका कार्यबाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद गौतमले बताए । कृषकले हिउँदमा आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन गरेको आलु बीउका लागि शीत भण्डारमा राखेका हुन् । हरेक वर्षआलु रोप्ने समयमा तराईलगायत अन्य विभिन्न जिल्लाबाट बीउको आलु आयात गर्नुपथ्र्यो । यसरी खरीद गर्दा बीउ आलु महँगो पर्नुका साथै अभावसमेत हुने भएकाले शीत भण्डारमा कृषकहरूले आलु भण्डारण शुरू गरेका हुन् ।
३ वर्षअघि जापान सरकारको ६६ लाख अनुदान, जिल्ला विकास समितिको १० लाख, कमलामाई नगरपालिकाको ५ लाख, विभिन्न ६ गाविसबाट १/१ लाख तथा अन्य स्थानीय जुनार कृषक सहकारी सङ्घ, संस्था, जुनार विकास सङ्घलगायतको ३२ लाख गरी रू. १ करोड २९ लाखको लागतमा जुनार विकास सङ्घ सिन्धुलीले कोल्ड स्टोर निर्माण गरेपछि कृषकहरूले यो सुविधा पाएका हुन् । हरेक वर्षको कात्तिकदेखि मङिसरको पहिलो हप्ता भित्र कृषकहरूले नगदेबालीका रूपमा आलुखेतीका लागि बीउ रोप्ने गरेका छन् । ६ महीनासम्म आलु कोल्ड स्टोरमा राख्न सकिने कोल्ड स्टोर सञ्चालक गौतमको भनाइ छ । सङ्घले कृषकहरूबाट एक सिजन ( ६ महीना) का लागि प्रतिकेजी आलुको ४ रुपैयाँमा कोल्ड स्टोरमा आलु भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
किसानले आलु रोप्ने मौसममा प्रतिधार्नी ६० देखि १ सय रुपैयाँसम्म मूल्यमा बीउ आलु खरीद गर्नुपर्ने वाध्यता झेल्दै आएका थिए । जिल्लामा कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आएपछि कृषकहरू अब महँगो मूल्यको बीउ आलु किन्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन् । कोल्ड स्टोरमा भण्डारण गरी राखिएको आलु करीब ६ महीनासम्म नबिग्रने कृषक निर्मलकुमार रम्तेल बताउँछन् । जिल्लाको जलकन्या, भद्रकाली रतनचुरा, मझुवा, झागाँझोली रातमाटा, तीनकन्यालगायत गाविसमा कृषकहरूले व्यावसायिक आलु खेती गर्ने गरेका छन् । कोल्ड स्टोरमा जुनार भण्डारण गरी बारै महीना बजारमा जुनार उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको जुनार सङ्घका कार्यबाहक अध्यक्ष गौतमले बताए ।
तनहुँको कफी उच्च गुणस्तरको
असार २१, दमौली(तनहुँ)(अस) । तनहुँमा उत्पादित कफीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुँदै आएको छ । यहाँ उत्पादित कफी अन्यको तुलनामा अत्यन्तै उत्कृष्ट ठहरिएकाले जापान, अमेरिका, जर्मनीलगायत मुलुकमा उच्च माग रहेको नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष वासुराज कडरियाको भनाइ छ । जिल्लामा औसतमा वार्षिक ६ टन अर्ग्यानिक कफी उत्पादन भइरहेको कडरियाले अभियानलाई बताए । जिल्लाबाट वर्षेनी जापान, अमेरिका, जर्मनीलगायत देशमा कफी निर्यात हुँदै आएको छ । विगत ४/५ वर्षदेखि तनहुँ जिल्लामा निरन्तर कफी उत्पादन वृद्धि भइरहेको कडरिया बताउँछन् । २०५१ सालमा पहिलोपटक पुर्कोट र रूपाकोट गाविसबाट शुरू भएको कफीखेती अहिले जिल्लाका अधिकांश गाविसमा विस्तार भएको छ । हाल जिल्लाका बन्दिपुर, शतिस्वाँरा, मिर्लुङ, चोकचिसापानी, रिस्ती, भानु, आबुखैरेनी, रूपाकोट, पुर्कोट, वसन्तपुरलगायत उच्च पहाडी गाविसका किसानले व्यावसायिक रूपमा कफीखेती गरिरहेका छन् । अहिले जिल्लाका ती गाविसलाई कृषि कार्यालयले कफीखेती पकेट क्षेत्रसमेत घोषणा गरेको छ । तनहुँमा लगाइएको कफी उच्चकोटीको हुने र विक्रीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि यहाँका किसान व्यावसायिक कफी खेतीतर्फ आकर्षित भएको कृषि कार्यालयको भनाइ छ ।
अहिले हाइल्याण्ड कफी कम्पनीले जिल्लाका किसानसँग खरीद गरेको अप्रशोधित कफी प्रशोधन गरी विभिन्न देशमा निर्यात गर्दै आएको छ । जिल्लामा पार्चमेण्ट कफी (बोक्रा फालेको)को मूल्य प्रतिकेजी १ सय ४० देखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म र ग्रीनविन कफी (बोक्रा नफालेको) प्रतिकेजी २८ रुपैयाँमा विक्री हुँदै आएको छ । जिल्लाका सबै भागमा अर्ग्यानिक कफी उत्पादन हुँदै आएको र उक्त कफी उच्च गुणस्तरको भएको तनहुँ कफी व्यवसायी सङ्घका सचिव विनोदकुमार श्रेष्ठले बताए । चिसो ठाउँमा उत्पादित कफीमा क्याफिनको मात्रा बढी हुने र यसले क्यान्सरलगायत रोगको राकथामसमेत गर्ने भएकाले तेस्रो मुलुकमा नेपाली अर्ग्यानिक कफीको माग बढेको उनले बताए । जिल्लामा कफीको माग बढेपछि अहिले पुर्कोट, चिसापानी र वसन्तपुरका कृषकले १५ ओटा कृषक समूह गठन गरी सामूहिक कफीखेती गरिरहेका छन् । कफी भण्डारण केन्द्र र प्रशोधन गर्ने मेशिनको अभावले अन्तरराष्ट्रिय गुणस्तरको कफी उत्पादन गर्न नसकेको किसानको गुनासो छ । चिस्यान कम हुँदा मूल्य कम पाइने भएकाले मेशिनको व्यवस्था हुन सके त्यसको प्रयोगबाट चिस्यान नियन्त्रण गरी कफीबाट अझ बढी मूल्य लिन सकिने सचिव श्रेष्ठले बताए ।